बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाएर अभियुक्तलाई सफाइ ! – RadioMBC
Home > समाचार > बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाएर अभियुक्तलाई सफाइ !
२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:१५
‘वैज्ञानिक परीक्षणबाट ९ साताभन्दा बढीको गर्भ रहेको पुष्टि भयो। घटना भएदेखि पीडितको शारीरिक परीक्षणको मितिसम्म गणना गर्दा १३ साताभन्दा बढी (९६ दिन) देखिन आयो। त्यसैले प्रतिवादीको करणीबाट त्यो गर्भ रहेको प्रमाणित हुन सकेन,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘त्यो दिनपछि पनि करणी गरेको भनी पीडितले खुलाएको नदेखिँदा केदार कोइराला उपरको कसुर स्थापित हुन नसकी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
‘प्रतिवादीको घरमा पीडित अहिल्यै पुनर्स्थापित हुने अवस्था देखिन्न। पीडितलाई जीवन निर्वाह, शारीरिक एवं शैक्षिक निरन्तरताको निम्ति १० लाख रुपैयाँ प्रतिवादीबाट खर्च भराई दिने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
‘सफाइ दिएको व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला कानुनविपरित छ। एकातिर सफाइ दिएको छ, अर्कातिर त्यही मान्छेबाट क्षतिपूर्ति दिलाएको छ त्यसैले यो फैसला शंकास्पद छ,’ उनले भनिन्।
‘मुद्दाबाट सफाइ दिने अनि प्रतिवादीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्न मिल्दैन। यस्तो कानुन पनि छैन, नजिर पनि छैन,’ उनले भने, ‘मुद्दाको प्रतिवादीले सफाइ पायो, तर घटना गराएको खास अभियुक्त फेला परेन भने त्यस्तो बेला सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भन्न मिल्छ। सफाइ पाएको प्रतिवादीले नै क्षतिपूर्ति दिने फैसला त्रुटिपूर्ण मानिन्छ।’
‘पीडितले ममाथि केदार कोइरालाले त्यो दिन बलात्कार गर्‍यो भनेको छ, तर अदालतले त्यसमा ध्यानै दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ल एकछिन मानौँ किशोरीको भ्रूण कोइरालाको थिएन रे, तर उनले त्यो दिन बलात्कार गरेका हुन् कि हैनन् भन्ने फैसलामा विश्लेषण गरिएको छ त? छैन। यत्तिकै सफाइ दिइएको छ।’
कोइरालाका वकिल भने किशोरीले बलात्कार भएपछि महिनावारी रोकियो भनेकाले मुद्दाको आधारभूत प्रमाण नै भ्रूण भएको जिकिर गर्छन्। ‘यो भ्रूण प्रतिवादीको होइन भन्ने पीडितको शारीरिक परीक्षणबाटै देखिन्छ, त्यसैले फैसला ठिक छ,’ उनले भने।
अल्का अस्पतालकी स्त्री रोग विशेषज्ञ नूतन शर्मालाई भ्रूणबाट डिएनए जाँच गर्न नमूना निकाल्न नसकिने अवस्था हुन्छ कि हुन्न भनेर सोधेका थियौ ।
उनले ‘भ्रूणबाट जुनसुकै अवस्थामा डिएनए परीक्षणको नमूना निकाल्न सकिने’ बताइन्।
‘गर्भमा रहेको र क्यूरेट गरिएको दुवै भ्रुणबाट डिएनए जाँचको स्याम्पल (नमूना) निकाल्न सकिन्छ। स्याम्पल निकाल्नै नसकिने त्यस्तो कुनै अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन्।